पुराना जहाज खरिदमा कडाइ गर्ने मन्त्री आलेको भनाईप्रति वायुसेवा संचालक संघको विरोध - Safal Awaj Safal Awaj
काठमाडौं, ३ असार । नेपाल सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेकाे पुराना जहाज खरीद गर्ने समय घटाउने भन्ने भनाईप्रति वायुसेवा कम्पनीका संचालकहरुले बिराेध जनाएका छन । मन्त्री जस्ताे जिम्मेवार ब्यक्तिले अव्यवहारिक र तर्कहिन अभिव्यक्ति भएको भन्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन प्रधानमन्त्री समक्ष पत्रमार्फत आग्रह गरेकाे छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्या. रामेश्वर थापाले संवाद नै नगरी मन्त्रीबाट एकतर्फी अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन। यसअघि १ असारमा संसदमा बोल्दै मन्त्री आलेले प्रेसराइज जहाज १० वर्ष र ननप्रेसराइज जहाज १५ वर्ष पुरानो भएपछि किन्न नपाउने गरी सरकारले नियम बनाउन लागेको बताएका थिए ।
जहाजको हरेक पार्टपूर्जाको निश्चित अवधि हुने र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ मापदण्डको पालना गरिएकाे बताउदै संघका अध्यक्ष क्या. थापाले विमानको उमेरसँग जहाज दुर्घटना कदापी दाँज्न नमिल्ने र हरेक दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवेदनबाट सबै कुरा छर्लङ्ग हुने बताएका छन।
यस्ताे छ वायुसेवा सञ्चालक संघले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएकाे पत्र :